Isodium yeMonosialotetrahexosylganglioside (GM1) yehagu yeBrain (37758-47-7) Abavelisi-iPhoker
I-GM1 powder isetyenziswe ngokubanzi ukunyanga ukulimala kwengqondo ye-neonatal hypoxic-ischemic, isifo sika-Parkinson ...
I-Monosialotetrahexosylganglioside Sodium (GM1) ingqondo yehagu (37758-47-7), igama elifutshane linokuba yi-GM1, ekhutshwe kwingqondo yehagu kwaye lilungu leqela le-ganglio ye-gangliosides equlathe intsalela ye-sialic acid.
Igama leKhemikhali Isodium ye-Monosialotetrahexosylganglioside (Ingqondo yePorcine)
Imida ye micimbi Inani elipheleleyo leebhakteria ze-aerobic kufuneka libe <100cfu / g, kwaye inani lilonke lomngundo kunye neigwele kufuneka libe <50cfu / g
I-GM1 inokukhuthaza ukubuyiswa kwakhona kwemisebenzi ye-neurological emva kokonzakala kwenkqubo ye-nervous system yezizathu ezahlukeneyo, ukukhuthaza i-neuroplasticity. Uvavanyo lubonisa ukonzakala kwengqondo ye-GM1 ye-vascular, ingqondo eyenzakalisayo yokubuyisela iiseli zemithambo-luvo kumonzakalo wentambo yomqolo inefuthe lokhuselo kunye nokukhuthaza indima yeseli.
I-GM1 (monosialotetrahexosylganglioside) i "prototype" i-ganglioside, lilungu le-ganglio uthotho lwee-gangliosides eziqulethe intsalela enye ye-sialic acid. I-GM1 ineempawu ezibalulekileyo zomzimba kunye nefuthe leplastiki ye-neuronal kunye neendlela zokulungisa, kunye nokukhululwa kwee-neurotrophins kwingqondo. Ngaphandle komsebenzi wayo kwi-physiology yengqondo, i-GM1 isebenza njengendawo yokubopha ityhefu yekholera kunye no-E.
Iyeza lalilawulwa ngedosi ye-20-40 mg yonke imihla ngenaliti efakwa ngaphakathi okanye efakwa kancinci kwimisipha ngokweengcebiso zikagqirha. Kwisigaba esibuhlungu sokutshintsha kwe-pathological: Iyeza lalisetyenziswa kwidosi ye-100 mg yonke imihla ngenaliti efakwa ngaphakathi; Emva kweeveki ezi-2-3, kugcinwa isixa esingama-20-40 mg yonke imihla kangangeeveki ezintandathu, idosi yokuqala ye-500-1000 mg yayilawulwa kukudinwa ngemithambo yesifo sikaParkinson; Ukusukela kusuku lwesibini, ichiza lalisetyenziswa kunye nedosi ye-200 mg mihla le ngokufakwa kwesitofu, ngenaliti ye-intramuscular okanye kwi-intravenous drip kwiiveki ezili-18 ngesiqhelo. xa eli chiza lalilawulwa ngenaliti engaphantsi okanye efakwa ngaphakathi, kufuneka inyibilikiswe kwaye ihlanjululwe emanzini ngenaliti kude kube kukuxinana kwe-10 mg / ml kwi; xa i-intravenous drip, ichiza belingathandwa kwaye lihlanjululwe kwi-0.9% yenaliti ye-sodium chloride okanye i-5% inaliti yeglucose.